Te Kuiti Bungalow, iimbono zamanzi asehlathini, eBruny Is. - I-Airbnb
Te Kuiti Bungalow, iimbono zamanzi asehlathini, eBruny Is.
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguRobert
I-Te Kuiti yindawo entsha, enencasa ye-bungalow esekwe e-bushland enemibono ebanzi ye-D'Entrecasteaux Channel. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kwaye ukonwabele konke uBruny anokukunika.
Indawo iqaqambile kwaye ikhanya igcwele ikhitshi elungiselelwe kakuhle, indawo yokuhlala etofotofo kunye neendawo zokutyela ezivuleleka kwidesika ejikelezileyo enembono yehlathi, iChannel kunye nokuwela ukuya kwichweba laseHuon Valley kunye neHartz Range.
IBungalow yabelana ngepropathi kunye nekhaya lethu, iTe Kuiti Cottage, apho sihlala khona.
Imigangatho eyenziwe ngamaplanga akhazimlisiweyo, iiragi zasempumalanga, indawo yomlilo ecothayo kunye nomxube wemizobo epholileyo kunye nefenitshala etofotofo, kuthetha iBungalow echoes yendlu yeeholide eqaqambileyo neshushu yaseScandinavia.
Igumbi eliphambili livula idesika enkulu ejikelezayo. Kukho ifanitshala yangaphandle ekhululekile, iWeber BBQ kunye neambrela. Ngaphakathi kukho ukufikelela okugqwesileyo kwe-wi-fi yasimahla, iscreen esicwebezelayo sikamabonakude, iDVD player kunye neDVD ebanzi kunye nethala leencwadi lokufunda.
Uya kuba nokufikelela ngokuthe ngqo kumda wamanzi okanye ukonwabele ukuhambahamba kwindawo yendalo kunye neegadi zethu zemveli, uthatha izilwanyana zasendle kunye neentaka ezininzi.
4.95 · Izimvo eziyi-126
I-Te Kuiti Bungalow ikwilokishi yaseAlonnah. Thatha uhambo olufutshane (okanye uhambo olude ngomzila wehlathi kunye nonxweme) ukuya edolophini. Yonwabela ulwandle oluzolileyo lwesanti okanye uwele indlela kwaye undwendwele ihotele edumileyo yaseBruny Island ukuze ufumane isidlo kunye nesiselo esiphilayo.
UAlonnah uphakathi. Kukuqhuba okumnandi kulo naliphi na icala ukuya kwiindawo ezininzi ezinomtsalane zaseBruny. Ngokuxhomekeke kwincasa yakho unokuyonwabela ukutya okumnandi okudumileyo kunye nababoneleli bewayini, uye kuwo onke amabanga eendle ezintle, uthathe ubukhazikhazi beNeck, Cloudy Bay, Adventure Bay, ndwendwela iindawo zokugcina izilwanyana, hamba ngesikhephe esinomdla okanye uhambo ngenqwelomoya okanye yonwabela iimpawu ezizodwa zoMzantsi Bruny National Park kunye nesibane sayo esimangalisayo.
Ngaphandle kokuhlangana kunye nokubulisa, siya kuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu ziyimfihlo, ngelixa sihlala sikhona ukunceda ukuba kuyafuneka kwaye sibonelela ngokufikelela kuyo yonke ipropathi yeehektare ezi-2.